DAAWO: Soomaaliya oo lagu qabtay markii 1aad Kulan Maalgashi caalami ah – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ October 21, 2019 ] SAWIRO:- Puntland oo olole balaadhan kawada Buuhoodle iyo Wasiir muhiim ah oo maanta gaaray.	Faalloyinka
[ October 21, 2019 ] DAAWO:- Wararkii ugu dambeeyay Rabshadihii Kismaayo iyo Garoowe + Arimo siyaasadeed oo ku lug yeeshay.	Faalloyinka
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO: Soomaaliya oo lagu qabtay markii 1aad Kulan Maalgashi caalami ah
DAAWO: Soomaaliya oo lagu qabtay markii 1aad Kulan Maalgashi caalami ah
September 15, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Wararka maanta 0
Kulankii ugu horeeyey oo maalgashi ah tan iyo markii ay dhacday dawladdii Kacaanka ee Soomaaliya ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Garoowe ee caasumada Puntland, waxaa ka qeybgalay masuuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan Ganacsato u dhalatay dalalka Caalamka, waxaana la casumay marti badan isagoo socday saacado badan oo xariir ah.
Inkastoo kulanka Maalgashigu uu ahaa mid ay agaasintay dawlad gobaleedka Puntland oo qeyb ka ah Soomaaliya, haddana ma jirin cid kasocotay dawladda Faderaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo ka qeybgashay, waxayna ahayd fariin weyn oo ay Soomaalidu u dirtay caalamka oo dhan.
Maalgashadayaal ajaaniib ah oo u kala dhashay Shiinaha, Khaliijka, Afrikada dhexe iyo Barriga Afrika ayaa madasha kusugnaa oo ay qaarkood hadal jeediyeen, waxayna Shirkad laga leeyahay dalka Sacuudi Careebiya ay sheegtay in ay maalgashi ku sameynayso Puntland.
Khabiiro ama dhaqaale-yahano kasoo shaqeeyey Bangiga Aduunka, qaarkoodna hadda ku jiraan Guddiga Sare ee dhaqaalaha Soomaaliya ayaa madashan ku cabiray in ay tahay mid muhiimad weyn ugu fadhida Soomaaliya oo ay dagaalo ka jireen mudo dheer.
ILA QOSOL+DAAWO: Xildhibaan Dalxa oo markale si adag kabaha ula dulmaray Reer Mudug!
DEG DEG+DAAWO: DFS oo dajisay Qorshaha qabashada Axmed Madoobe, Wasiiro, Xildhibaano & Siyaasiin caan ah.
DAAWO:- Maxkamadda Sare oo dhawaan qaadaysa dacwad udhaxeysa RW.Kahyre iyo Sheikh Shariif.
DAAWO:- Jubbaland oo si adag uga hadashay dilkii Ganacsadaha Majeerteen ee Kismaayo lagu dilay.
Soomaaliya ayaa horay usii wadi doonta dadaalada yareynta saboolnimada iyo dekedaha gobolka iyo wadooyinka waa weyn hadii daymaha caalamiga ah uu cafiyo deynta ah $ 5 billion ee bishaan Febraayo, sida la filayo, wasiirka maaliyada […]
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa qabsaday baraha bulshada iyo Warbaahinta qaarkood in dhamaan qareenadii difaacayay Soomaaliya ee dhinaca dacwadda Badda gaar ahaan Muna Sharmaan oo ah gabar Soomaaliyeed oo baratay sharciga la bedelay,hayeeshee waxaa […]